NextMapping | भविष्य साझा छ
मिन्डभालीका जेसन क्याम्पबेलले चेरिल क्रानलाई 'आत्म-नेतृत्व' बारे साझा साक्षात्कारको आवश्यकता छ।
यस अन्तर्वार्ताको पूर्ण अडियो सुन्नको लागि जानुहोस् यहाँ।
जेसन: मसँग यहाँ चेरिल क्रेन छ, जुन मेरो ओह, हामीसँग यस्तो व्यवहार हुनेछौं जुन कामको भविष्यको बारेमा कुरा गर्दैछ र भविष्य साझा हुन्छ। मेरो मतलब त्यो ओनालिटिकाबाट नम्बर एक प्रभावकर्ताको रूपमा मान्यता पायो। जब यो शीर्षकको बारेमा कुरा गर्ने आउँछ, कामको भविष्य कस्तो देखिन्छ? उनी एक नेता हुन् जुन विश्वभरि स organizations्गठनहरूमा बोल्छिन्। हाम्रो नवौं पुस्तकमा आठ पुस्तकहरू लेखिएको छ जुन हामी आउँदैछौं र अहिले हामी के कुराको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन अहिले भइरहेको छ, वास्तवमै के हुँदैछ, यी परिवर्तनहरू जुन हामी अहिले कार्यस्थलमा देखिरहेका छौं? भविष्य कस्तो देखिन्छ र हामी यसको बारे के गर्न सक्दछौं असाधारण उत्पादनशील रहन र अविश्वसनीय प्रभाव बनाउन। चेरिल, शो मा हुनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद।
जेसन: म सुन्न चाहान्छु कि मानिसहरूलाई परिवर्तनमा जान मद्दत गर्ने यस ठाउँमा पुग्नको लागि तपाईंको यात्रा कस्तो थियो र तपाईं कसरी त्यस क्षेत्रमा नेभिगेट गर्न सक्षम हुनुभयो र कम्पनीहरूलाई वास्तवमै के गर्न आवश्यक छ भनेर बुझ्न मद्दत गर्नुहोस्?
Cheryl: त्यसोभए मेरो यात्रा अलि अलि परम्परागत हो कि म विश्वविद्यालय वा कलेजमा गइनँ। जुन अहिलेको चलन हो!
मैले आफ्नो क्यारियर हाई स्कूलबाटै सुरू गरेको थिएँ र म बैंकि into्गमा गएको थिएँ। म धेरै उपलब्धीमुखी थिएँ। मलाई कडा परिश्रम गर्न, कडा परिश्रम गर्न सिकाइएको थियो र म २ young बर्ष उमेरको धेरै युवा नेतृत्वको पदमा पदोन्नती भएँ।
एक नेताको रूपमा मेरो अद्वितीय शैली दर्शन सेट गर्न र मानिसहरूलाई परिवर्तनको साथ आउन प्रेरित र प्रेरित गर्न थियो। सुरुदेखि नै यो मेरो तारकरी नै हो र मैले त्यो कलाको सबै प्रयोग गरें जबसम्म म बैंक छोड्दिन र जाँदै गयो र बीमामा गएँ, एक धेरै सफल बीमा हातको टाउकोमा, विकासकर्ता र रियाल्टर्सहरूको लागि धेरै पेशेवर बोले र अन्य समूहहरू। त्यसोभए पेशेवर बोल्नु भनेको मेरो क्यारियरको ट्र्याग्जोरी पनि हो।
मैले मेरो पहिलो पुस्तक लेखे, "भन्नुहोस् तपाई के भन्न चाहानुहुन्छ - मतलब तपाईले के भन्नु हुन्छ"२००१ मा र त्यो पुस्तक हामी कसरी साँच्चै अनिश्चित भविष्यमा नेभिगेट गर्छौं र हामीले के गर्न सञ्चार गर्नु पर्छ भन्ने बारेमा थियो।
र त्यसपछि आठ पुस्तकहरू पछि, र म २० वर्ष भन्दा बढी हाम्रो परामर्श फर्मसँग निजी अभ्यासमा छु। मैले पुस्तक लेखे "नेक्स्टमैपिंग - अपेक्षित गर्नुहोस्, नेभिगेट गर्नुहोस् र कामको भविष्य सिर्जना गर्नुहोस्" दुई बर्ष पहिले र त्यो भन्दा पहिले "परिवर्तन को नेतृत्व नेतृत्व - एक द्रुत गति संसारमा ड्राइभ रूपान्तरण"। मेरो व्यक्तिगत क्षमता अशक्त परिवर्तनमा एकदम चपल हुन सक्ने कुरा हो जुन म कार्यकारी रणनीतिहरुमा काम गर्ने ग्राहकहरुमा हस्तान्तरण गर्न सक्षम भएको छु तर हाम्रो टोलीमा र मानिसहरुसंग जुन हामी प्रशिक्षक पनि छौं र परामर्श पनि लिनु पर्छ।
जेसन: के परिवर्तनहरू द्रुत गतिमा बढ्दै छन्? के प्रविधि हाम्रो काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्दैछ? किन परिवर्तन यति गाह्रो छ?
Cheryl: ठीक छ, मलाई लाग्छ कि यो माथिको सबै संयोजन हो। पीटर Diamandis, एकवलिटी विश्वविद्यालय को सह संस्थापक घातीय परिवर्तन र परिवर्तनको घातीय गति को बारेमा कुरा गर्दछ। र त्यो हो जुन हामी अहिले बाँचिरहेका छौं। त्यसैले हामी दशकौं देखि परिवर्तनको कुरा गर्दै छौं, तर दुई हजार सम्म परिवर्तन व्यवस्थित थियो। उदाहरण को लागी, एटीएम मेशिनहरु को बारे मा कुरा गरौं। त्यो परिवर्तन एक सुविधाजनक परिवर्तन हो जुन सबैले स्विकार गरे, धेरै चाँडै। तर जब तपाईंसँग दुई हजार छ र अब तपाईं मासिक आधारमा घट्ने नवीनता पाउनुभयो जुन दुवै टेक्नोलोजी परिवर्तनको साथसाथै सामाजिक परिवर्तनसँग जोडिएको छ। व्यक्तिको दिमाग विभिन्न थोरै चीजहरूको लागि खोलिरहेका छन्। सोसाइटाली भनेको मैले भन्न खोजेको कुरा हो कि हामी त्यस्ता चीजहरूको बारेमा खुलेआम कुरा गरिरहेका छौं जुन एक दशक पहिले कहिल्‍यै पनि छलफल गरिएको थिएन र वास्तवमै हामी कसरी परिवर्तनमार्फत संसारलाई कसरी सुधार गर्ने भनी हेरिरहेका छौं। तर तपाइँ सही हुनुहुन्छ, मनोवैज्ञानिक रूपले परिवर्तन गर्नु भनेको व्यक्तिहरूका लागि सबै भन्दा गाह्रो कुरा हो। हामी एक 'म हामी' मानसिकतामा सर्दैछौं जुन साझेदारी गरिएको भविष्य सिर्जना गर्न आवश्यक छ।
टेक्नोलोजी एकदम सजिलो छ। तपाईं सीआरएम र प्लेटफर्मको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो अंश सजिलो छ। तपाई भन्न सक्नुहुन्छ, राम्रोसँग, यो समस्या टेक्नोलोजीद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ। यो चुनौती हो कि मान्छे हो।
हामी व्यक्तिलाई भविष्यमा किन्नु पर्ने परिवर्तनको योग्यता हेर्न, परिवर्तनलाई उनीहरूको व्यक्तिगत अर्थसँग जोड्न र परिवर्तनले उनीहरूमा कस्तो असर पार्ने छ भन्ने सम्बन्धमा जोड्नको महत्त्वलाई कम महत्त्व दिदैनौं। व्यक्तिगत रूपमा। म दृढ र दृढ र जोशसँग विश्वास गर्दछु कि जबसम्म हामीसँग छैन नेतृत्व दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुहोस् टेक्नोलोजी नवप्रवर्तनको लागि, हामी व्यक्तिहरूबाट पुशब्याक प्राप्त गर्न जारी राख्नेछौं किनकि मनोवैज्ञानिक परिवर्तनलाई विश्वास गर्दैनौं जबसम्म हामी यसलाई अर्थमा जडान गर्न सक्दैनौं र मलाई लाग्छ कि त्यो त्यस्तो चरम सीमा हो जुन हामी अहिले छौं।
जेसन: वाह। म वास्तवमै अझ त्यो पत्ता लगाउन मन पराउँछु किनकि म कम्पन भित्रै टेक्नोलोजी इनोभेसनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरेको समयसँग धेरै परिचित छु र मैले देखेको छु कि सबैले कसरी मेरो विरोध गर्दछन् र तपाईले धेरै कुरा गर्ने बारेमा कुरा गर्दा पनि। कामको भविष्य पूर्वानुमानको बारेमा बोल्नुहोस् मानव व्यवहारको यही तत्व हो। यसको मतलबको यो धारणाको बारे तपाइँ के भन्न चाहानुहुन्छ? मलाई लाग्छ धेरै समय मानिसहरू न्यायी छन्, र म आफैं पनि, म सन्देहवादी छु कि परिवर्तन वा प्रविधि वा जे पनि आउँदैछ मेरो जीवनलाई सजिलो बनाउँदछ। के यो वास्तवमै त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ अन्तर भइरहेको छ?
Cheryl: मेरो किताबमा, "नेतृत्व परिवर्तनको कला", म परिवर्तन चक्रको बारेमा कुरा गर्छु र हामी कसरी परिवर्तन सबैसँग उस्तै उस्तै व्यवहार गर्छौं। हामी मध्ये कसैले कसरी विकास भएको त्यसले फरक पार्दैन, जब परिवर्तन हुन्छ, एक प्रारंभिक पुशब्याक प्रतिक्रिया हुन्छ, एक प्रतिरोध प्रतिक्रिया हुन्छ, र त्यो प्रतिक्रिया हो मलाई परिवर्तनमा विश्वास हुँदैन। मलाई लाग्दैन कि यो कसरी भयो यो भन्दा राम्रो हुनेछ र म पक्का छैन कि म यसलाई अधिकै प्रभावकारी हुनको लागि यसका लाभ उठाउन आवश्यक भएको ठाउँमा लैजान सक्नेछु। त्यो चरण एक आवश्यक चरण हो। यो वास्तवमै एक महत्वपूर्ण सोच चरण हो। जहाँसम्म धेरै व्यक्तिहरू त्यस चरणमा अडिग हुन्छन् किनकि तिनीहरू केमा काम गर्दैनन् वा यसले कसरी गलत हुन गइरहेको छ भनेर अलमल्लमा पर्छन्? त्यसोभए तिनीहरू टेक्नोलोजीमा औंलाहरू र प्वालहरू बनाउँन चाहन्छन र भविष्य बनाम अर्को चरणमा जान्छन, जुन यही हो जुन म रचनात्मक समाधान भन्छु, जहाँ तपाईं हेर्न थाल्नुहुन्छ, ठीक छ, के हो, त्यसो भए यदि म तपाईंलाई संलग्न गर्दै थिए जेसन र परिवर्तन गर्नुहोस्, बरु तपाईको अगाडि आउनुहोस् र सबै उत्साहित हुनुहोस् र भन्नुहोस् कि हामी परिवर्तन हुनेछौं, हामीले यो नयाँ सीआरएम पायौं, यो अति उत्तम छ।
यो तपाईको लागि सबै चीज यति सजिलो बनाउँदछ। तपाईको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया शंकास्पद हुन जानेछ। तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ कि म तपाईलाई एक धेरै ठूलो लोड बेचिरहेको छु के थाहा छ? तपाईं म वा टेक्नोलोजीमा विश्वास गर्नुहुने छैन किनभने मैले तपाईंलाई यसलाई बेच्ने प्रयास गरिरहेको छु। र तसर्थ जब म अर्थको बारेमा कुरा गर्छु, यो यसलाई जोड्ने बारे हो जुन यो जेसन र उसको कामको लागि मतलब हो। भविष्यको साझेदारी गरिएको लेन्सको माध्यमबाट यसलाई हेर्न। यसको सट्टामा, यदि म तपाईं कहाँ आउँछु र भन्छु, हामी धेरै सीआरएमहरू अन्वेषण गर्दैछौं, हामी वास्तवमै तिनीहरूमा तपाईंको इनपुट चाहन्छौं। तपाइँ हामीलाई भन्नुहन्छ कि यसले तपाइँको दैनिक काममा कसरी फरक पार्ने छ? यी सम्भावित प्रविधिहरू जब तपाईले देख्नुहुन्छ भनेर के प्रश्नहरू छन् र यदि तपाई यी नयाँ सीआरएम प्रोग्रामहरूको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाई जीवनमा तपाईको कामलाई सजिलो बनाउने के कल्पना गर्नुहुन्छ? NextMapping मा हामी PREDICT मोडेलको बारेमा कुरा गर्छौं। र यी सबै परिवर्तन कार्यहरू बनाउने मुख्य तत्वहरू मध्ये एक हो भीडसोर्सिंग। र म केवल सामान्य कर्मचारी सर्वेक्षण वा ग्राहक सर्वेक्षणको बारेमा कुरा गरिरहेको छैनँ, म एउटा मानिससँग मानिससँग, मानवसँग मानव भनाइका साथ एकसँग एक अर्थपूर्ण कुराकानीको कुरा गरिरहेको छु, यसले तपाईलाई के भन्न खोजेको हो? तपाईं यसलाई कसरी काम गरिरहेको देख्न सक्नुहुनेछ र हामी कसरी सिर्जनात्मक रूपमा यसलाई माथि बढाउने तरिकाहरू विचार गर्न सक्छौं जसले यो तपाईंको लागि र सबैका लागि उच्च स्तरमा सम्भव कार्य गर्दछ।
जेसन: चेरिल, हामीले मेरो क्यारियरमा पहिले नै कुराकानी गरिरहनुपर्‍यो! अब जब तपाईं यो भनिरहनु भएको छ, म ती सबै पटकहरू सम्झँदै छु जुन मैले ड्रमलाई ठिक कुटाई गरीरहेको छु र कति प्रतिरोध, मैले कति अप्ठ्यारो लडाई लड्नु परेको थियो किनकि मैले यी नवीनताहरू ल्याउने प्रयास गर्दै थिएँ, यी उपकरणहरू किनभने म यस बारे मा धेरै उत्साहित भयो। र के अनुमान? म दिंड भ्यालीमा बिक्री मान्छे को रूपमा चिनिन्छ र त्यसैले सबैजना सधैं सन्देहको हावामा आउँदछन्।
त्यसैले मलाई यो प्रिडिक्ट मोडलमा अलि बढी विस्तार गर्न मनपर्दछ जसले हामीलाई नवीनता र नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउन अझ राम्रो हुन दिनेछ र कार्यस्थलमा अझ बढी उत्पादक हुन। र यी धेरै चीजहरू एआई वरपर छन्, जुन हामी थोरै पछि कुरा गर्नेछौं, तर पहिले हामी यस प्राडिक मोडेललाई भत्काउन चाहन्छौं हामीलाई मद्दत गर्न वा यस बिन्दुमा मलाई मद्दत गर्न।
Cheryl: यो भविष्यवाणी मोडेल भविष्यको भविष्यवाणी गर्न मद्दतको लागि एक उपकरण हो र हामी प्रकृति खोज्दछौं जुन प्रिडिक्ट मोडेलको पी हो। मोडेलमा सात तत्वहरू छन्। म केवल पहिलो दुई कारणको बारेमा कुरा गर्नेछु जुन हामी शाब्दिक रूपमा दुई घण्टा पोडकास्ट गर्न सक्दछौं केवल प्रिडिकट मोडेलमा। हामी केवल P र R को बारेमा कुरा गर्नेछौं, P पैटर्नका लागि हो।
R को मान्यताका लागि। यदि हामी आफैं ब्यापारिक मालिक वा कोही व्यक्तिगत रूपमा सुन्न चाहन्छौं भने, यदि तपाई भविष्यमा पकड पाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईले ढाँचामा हेर्नु पर्छ, बिभिन्न परिप्रेक्ष्यबाट पैटर्नलाई हेर्नु पर्छ। कार्य कौशलको भविष्य मध्ये एक जुन हामी सबैलाई उच्च स्तरमा विकास गर्न आवश्यक पर्दछ बहुविध दृष्टिकोण राख्नको क्षमता हो।
त्यसोभए तपाई यी सबै बहु परिप्रेक्ष्यहरुमा हेर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि तपाई त्यो ब्यबहार हेर्दै हुनुहुन्छ जुन ती सबै परिप्रेक्ष्यहरूबाट देखा पर्‍यो। त्यसोभए उदाहरणको लागि, यदि हामीले त्यस्तो कम्पनीमा ध्यान दियौं भने जुन धेरै बिक्रीले संचालित हो, स्पष्ट रूपमा हामी त्यो डाटा बिक्रीको परिप्रेक्ष्यबाट जम्मा गर्ने गर्छौं, तर हामी त्यस अपरेशनहरू, लेखा र ग्राहकहरूसँग लिंक गर्ने ढाँचाका लागि हेर्नेछौं। र त्यहि सुन हो किनकि भविष्यले नै हामीलाई औंल्याउँछ किनभने अब हामी जान सक्दछौं, ओह एक सेकेन्ड पर्खनुहोस्। त्यसोभए बिक्रीले भनेको छ कि व्यक्ति बढी सेवा दिन चाहन्छन्। अनलाइन अपरेशनले भनेको छ कि हामीसँग टेक्नोलोजी छैन मानिसहरुलाई सेवा प्रदान गर्न को लागी सेवा गर्न को लागी बिक्री को लागी हामी भन्छौं र लेखा गर्न कि धेरै पैसा खर्च गर्न भन्नुहोस्। त्यसोभए जुनसुकै परिप्रेक्षमा भए पनि, हामी सबैलाई सँगै ल्याउँदछौं र हामी पैटर्नलाई मान्यताका माध्यमबाट साझा मैदान पाउँछौं। र त्यो साझा आधार हुन सक्छ कि हामी लेखाको लागि पैसा बचाउन सक्छौं यदि हामीले यसलाई निश्चित तरिकामा कार्यान्वयन गर्‍यौं भने, हामी मार्केटिंगलाई राम्रो काम गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं किनभने अब हामीलाई थाहा छ ग्राहकलाई के चाहिन्छ स्वयं सेवाको लागि। हामी अपरेसनहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछौं सही टेक्नोलोजी समाधान चयन गर्नका लागि ती नमूनाहरू जुन हामीले पहिचान गरेका छौं।
जेसन: म यी प्रवृत्तिका बारेमा अझ बढी कुरा गर्न चाहन्छु जुन हामीले हेरिरहेका छौं। टेक्नोलोजी फ्रन्टको साथ सुरु गरौं किनकि मलाई लाग्छ टेक्नोलोजी साँच्चिकै नै रमाइलो चीज हो जुन मानिसहरू हातमा उठाउन चाहन्छन्। त्यसो भए यी ठूला चलनहरू के के हुन्? तपाईंले ओपन सोर्सि mentionedको उल्लेख गर्नुभयो। हामीले धेरै कुरा गर्‍यौं र स्पष्ट रूपमा बिक्री पृष्ठभूमिमा भएको हुँदा, जब तपाईं प्रणाली र सीआरएमको बारेमा कुरा गर्नुहुन्छ तब म उत्साहित भएँ। यी ठूला चीजहरू के हुन् जुन हामीले हेर्ने छौं कि यसले हामीलाई कार्यस्थलमा व्यक्तिहरूको रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ?
Cheryl: म खुशी छु कि हामीले अन्तर्वार्ता सुरु गर्यौं मान्छेहरूको बारेमा कुरा गर्दा किनभने नेक्स्टमैपिंगमा यो कुञ्जी हो जुन हामीले हेर्नुपर्दछ, स्पष्ट छ, हामी सबै टेक्नोलोजीको बारेमा उत्साहित हुन्छौं किनकि यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा असर गर्छ। हामी सबै सिरी र अलेक्सा प्रयोग गरिरहेका छौं, हामी सबै भ्वाइस एक्टिभेसन प्रयोग गर्दैछौं, हामी सबै टच टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहेका छौं। हामी सबै अनुहार पहिचान प्रयोग गर्दैछौं, त्यसैले हामी उत्साहित हुन्छौं, तर म साँच्चिकै उत्कट महसुस गर्दछु कि हामीले प्रविधि पहिलो लेन्सको साथ टेक्नोलोजीमा हेर्नु पर्छ। हामीले यस्ता प्रश्नहरूसँग सुरु गर्नुपर्नेछ:
यसले ग्राहकको अनुभवलाई कसरी असर गरिरहेको छ? यसले कसरी कर्मचारीको अनुभवलाई असर गरिरहेको छ? यसले सम्पूर्ण मानवतालाई कसरी सहयोग गरिरहेको छ? र मलाई लाग्छ कि यदि हामीसँग अग्रिम रूपमा ती प्रश्नहरू छन् भने, त्यसो भए हामी सबै टेक्नोलॉजिकल नविकरणका साथ ठीक हुनेछौं जुन हामीले सामना गरिरहेका छौं। यो हाम्रो वेबसाइट मा डाउनलोड को लागी उपलब्ध छ २०२० को लागि शीर्ष २० प्रवृत्ति भनिन्छ
हामी धेरै चीजहरू देखिरहेका छौं। नम्बर एक, पाँच जी पांच जी को एकीकरण सर्वव्यापी बन्न गइरहेको छ र यसको मतलब अब हामी भ्वाईस एक्टिभेसन को अनुहार मान्यता को उच्च स्तर अपनाउने छौं। यी सबै प्रविधिहरू जुन हामी भर्खरै सुरु हुन थाल्यौं। एआई को किनारा भविष्य को लागी चीजहरु बृद्धि गर्न र सिफ्ट गर्न जारी छ र भविष्य साझा छ कि वास्तविकता वृद्धि गर्न। एआई वास्तव मा हामी कसरी व्यापार गर्छौं भन्ने बदल्न जारी रहनेछ, त्यसैले यसले रोजगार लिने छैन। यो कार्यहरू लिदैछ जुन मानिसहरूले दोहोर्याउने स्तरमा गर्छन्। त्यसोभए जब हामी एआईको निरन्तर प्रवृत्तिलाई हेर्छौं, हामीले देखेका अन्य प्रवृत्तिहरू हुन् अटोमेसन, रोबोटिक्स संगठनहरू निर्माणमा भारी भएका, बढी कोबोट, स्वास्थ्य सेवामा बढी हेरचाह गर्ने बट्स, मानवलाई १० गुणा शक्तिमा सामान उचाल्न मद्दतको लागि अधिक एक्सोस्केलेटनहरू एक पुरुष को। त्यहाँ धेरै नवीनता छ। वास्तवमा, म यस बारे उत्साहित हुन्छु, हामी शाब्दिक रुपमा प्रविधिको माध्यमबाट आउँदो केही वर्षहरुमा थुप्रै मानव वर्तमान रोगहरूको समाधानको परिधिमा छौं। हामी संज्ञानात्मक VR थेरेपी मार्फत मानसिक रोग जस्ता चीजहरू समाधान गर्ने धारमा छौं। भर्चुअल रियलिटी थेरापी जीवित रहनको लागि यस्तो रोमाञ्चक समय हो र त्यसैले यी प्रविधिहरूले ग्रहलाई रूपान्तरण गर्न गइरहेका छन्।
हामीसँग यस ग्रहमा billion अरब मानिस छन्। आधा आधा WIFI मा जडित छन्। अहिले नै आउँदो तीन बर्षमा, of 8% ग्रहको WIFI मा जडान हुनेछ। त्यसोभए यदि तपाईंलाई लाग्छ कि हामीसँग नयाँपन छ भने जनसंख्याको %०% ले वृद्धि गर्दछ। अब खुला स्रोतमा थप्दै, डाटाबेसमा थप्दै, सामूहिक ज्ञानमा थप्दै जुन हामी टेक्नोलोजी मार्फत संकलन गर्दैछौं। तपाईं या त भविष्यको बारेमा दुई विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ।
नम्बर एक प्रतिक्रिया धेरै डराउनु पर्छ। वा नम्बर दुई, तपाईं सुपर उत्साहित र अति सुन्दर बन्नुहुनेछ र तपाईं सम्भाव्यतालाई हेर्नुहुन्छ हामी कसरी ग्रहलाई शाब्दिक रूपान्तरण गर्न सक्छौं। र म यो भन्दिन कि एक आदर्शवादी दृष्टिकोणबाट। म भन्छु कि यो ग्रहको निर्माणको लागि हामी धेरै वास्तविक छ। उनीहरू वातावरणीय चुनौतिहरू समाधान गर्दैछन्। तपाईंलाई थाहा छ, हामीसँग ग्रेटा थन्बर्गले वातावरणको बारेमा कुरा गरिरहेका छन। त्यहाँ समाधानहरू छन्। त्यहाँ अहिले उत्पादनहरू सिर्जना गरिएको थियो जुन तरलको थोपाको साथ, प्लास्टिकहरू यसको मूल आकारको १० औंमा ल्याउन सकिन्छ। त्यहाँ यति धेरै नवीनता छ कि हामी मिडियामा सबै नकारात्मक सामानहरू सुन्छौं। हामीले आविष्कारको बारेमा सुनेका छैनौं जुन हाम्रो वर्तमान चुनौतिहरू, विगतको कुराले धेरै बनाउँदछ र त्यसैले जीवित रहनको लागि अत्यन्त रमाइलो समय हो।
जेसन: चेरिल, मलाई मनपर्दछ कि तपाईं के हुँदैछ भनेर विचारको केहि साझा गर्न सक्षम हुनुभयो। यो अत्यन्तै रमाईलो छ र म यसको बारेमा तपाईं कत्तिको सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने चाहान्छु, म चाहन्छु कि मानिसहरू भविष्यको बारेमा थाहा पाएर सहजै महसुस गरून् भन्ने चाहान्छन् कि उनीहरू भविष्यको आउँदैछन् र यसको अर्थ उनीहरूको र तिनीहरूको भूमिकाको लागि के हो किनभने त्यहाँ मेरो महत्त्वको जस्तो विचार छ, जस्तै, वाह, यो सबै परिवर्तन भइरहेको छ। म कुन भूमिका खेल्छु? म कसरी परिवर्तनको यस सागरमा सान्दर्भिक रहन सक्छु? जस्तो मेरो केसमा पनि, मँ पहिले नै साधारण चीजहरू जस्तै संघर्ष गर्दैछु जस्तो सरल स्वचालन टेक्नोलोजीमा नवीनता, तर तपाईंले भर्खर के कुरा गर्नुभयो भन्दा धेरै मानिसहरूले तिनीहरूको दिमाग वरिपरि प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यसोभए हामी कसरी यो बहुतायतमा प्रवेश गर्छौं र हामी कसरी आफ्नो भूमिका खेल्छौं?
Cheryl: यहीँ मेरो मानवता मा विश्वास धेरै छ। मसँग धेरै विश्वास छ कि हामी चुनौतिहरू धेरै हल गर्न जाँदैछौं। मैले पहिले भनेझैं, त्यहाँ मसँग धेरै प्रश्नहरू छन् कार्यपुस्तकमा सोध्नुहोस् "नेक्स्टमैपिंग" वरपर, तपाइँसँग डराउने मानसिकता छ वा तपाइँसँग भविष्यको बारेमा प्रचुर मानसिकता छ? तर म एक धेरै देखि लाग्छ, अर्को परिप्रेक्ष्य के हो, यो वास्तवमै तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ अब हेरिरहेको छ। त्यसोभए यदि तपाइँ उदाहरणको लागि टेक्नोलोजीसँग डराउनुहुन्छ भने, वा तपाई समाजले चल्दै गरेको दिशादेखि डराउनुभएको छ भने, मलाई लाग्छ कि यो हाम्रो लागि वास्तविक अवसरमा वास्तवमै विकास हुने अवसर हुने अवसर हो। म विश्वास गर्दछु कि हामी यहाँ एक विकासवादी अवसरमा छौं र त्यसैले जब तपाई परिवर्तनलाई हेर्नुहुन्छ, तपाईले यसलाई हेर्नुहोला किनकि मलाई डर छ, मलाई यसको मतलब के हो भनेर थाहा छैन। वा तपाईं यत्तिको रमाईलो त हेर्न सक्नुहुन्छ र भविष्य साझा गरिएको।
त्यहाँ जान ठीक छ। परिवर्तन गर्ने त्यो पहिलो हो भन्ने बारेको चेतना हो मलाई डर लाग्छ र मलाई यसको मतलब के हो भनेर थाहा छैन, तर दोस्रो चरण हो भनेर स्वीकार गर्दै र त्यसपछि भन्दछु, म के गर्न सक्छु भने म आफ्नो सोच बदल्न सक्छु? उदाहरणको लागि, यदि समाज अधिक प्रजातान्त्रिक समग्र समावेशी समाजतर्फ अघि बढिरहेको छ भने हामीसंग त्यसो गर्ने अवसर छ: किन छैन?
के म एक पावर पोजीशनमा समात्दै छु? के मेरो अहंकारले मलाई फन्दामा पार्दैछ र विश्वास गर्दछ कि म जबसम्म म शक्ति समाउनेछु, म जितिरहेको छु?
भविष्य साझा छ, भविष्य सहयोगी छ, भविष्य सामूहिक छ। र भविष्यको लागि तयार हुनको लागि एक मात्र तरीका भनेको परिवर्तनलाई हाम्रो विकासको लागि संकेतको रूपमा हेर्नु हो। र त्यहाँ अझ धेरै गहिराई त्यहाँ छ किनकि तपाइँलाई MindValley मा थाहा छ कारण तपाइँ सबै कुरा हो। त्यहाँ यति गहिराइ छ कि कुनै पनि समय परिवर्तन हुन्छ वा कुनै पनि समय अवरोध हुन्छ, यो हाम्रो लागि कल हो, हाम्रो लागि जाने अवसर हो, म यसलाई कसरी सृजनात्मक रूपमा हेर्न सक्छु?
म कसरी मेरो मानसिकता अनुकूलन गर्न सक्छु ताकि म यो परिवर्तनको पछाडि धकेल्दिन, तर वास्तवमा परिवर्तनको सम्भाव्यतालाई मैले हेरेकी छु?
र फेरि, मेरा श्रोतहरूबारे कुरा गर्दै, तपाइँलाई थाहा छ, "परिवर्तन नेतृत्वको कला" म त्यस बारे कुरा गर्छु। हामी अर्को परिवर्तन गर्न कसरी परिवर्तन गर्ने?
र नेक्स्टमैपिंगमा हामी ती मोडेलहरू प्रदान गर्दछौं मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्न।
जेसन: यो त्यस्तो चीज हो जुन मलाई लाग्छ कि हामी सबैको लागि इच्छुक छौं तर स्पष्ट छ, हामी कहिलेकाँही हाम्रो अहंकार मृत्यु प्रकारको लडाईहरूको सामना गर्दछौं जुन हामीले पार गर्नुपर्दछ र म प्रेम गर्दछु कि धेरै काम र चीजहरू जुन तपाईं टेक्नोलोजीको बारेमा बोल्नुहुन्छ तर महान छ तर जैसा कि तपाईंले उल्लेख गर्नुभयो यो वास्तवमै यसलाई अनुकूलन गर्ने हाम्रो मानवीय व्यवहार हो र म वास्तवमै हेर्न चाहन्छौं कि यदि हामीसँग सुन्न सक्ने कसैलाई दिन सक्ने थप उपकरणहरू छन् कि जो नेतृत्वको स्थितिमा छ र सम्भवतः उनीहरूको टोलीमा रहेका मानिसहरूसँग व्यवहार गर्दैछ जुन वास्तवमै यी हुन्। नकारात्मक दिमागका प्रकारहरू र कसरी तपाइँ वास्तवमै तिनीहरूलाई काम गर्ने ठाउँमा परिवर्तनको लागि अझ राम्रो बनाउनको लागि प्राप्त गर्नुहुन्छ। विशेष गरी यदि यो कुरा आउँछ कि पनी त्यस्तो कार्यस्थलमा विशेष स्थानको आवश्यकताको अन्त्य गर्न सक्दछ। यो नेभिगेट गर्न केहि गाह्रो जस्तो देखिन्छ। तपाईंले के देख्नु भएको छ वा के तपाईंले अपेक्षा गरिरहनु भएको छ?
Cheryl: मैले अमेरिकामा स्वास्थ्य समूहसँग काम गरें र उनीहरू ठूलो पुनर्संरचनाको क्रममा थिए। त्यसोभए उनीहरू अर्को इकाईले किनेका थिए जसको अर्थ हो कि of० कोठामा करीव १० नेताहरू जुन मैले सहज गर्दै थिए अनावश्यक हुने थियो। तिनीहरूको लागि कुनै ग्यारेन्टी भूमिका थिएन। त्यहाँ कुनै स्पष्ट परिभाषित भविष्य वा क्यारियर पथ वा तिनीहरूका लागि उत्तराधिकार योजना थिएन।
अब, कसैको कुरा सुन्नको लागि, आज शुभ समाचार हो, बेमानी बनाएको जो कोहीसँग अवसर छ किनकि उत्तरी अमेरिकामा २० worker० सम्म यतासम्म ag ag करोड मानिस मजदुरको अभाव हुनेछ किनकि तपाई सशक्त हुनुहुन्छ र अनुकूलन गर्न सक्षम, तपाईं काम अवसरहरू हुनेछ। त्यो वास्तविकता हो। पछि, १ then वर्ष पहिले उस्तै थिएन।
हामीले के गरेका थियौ कि मैले ती leaders० नेताहरूसँग टेबुल वरिपरि छलफल गर्न सहयोग गरें र भने, “यहाँ वास्तविकता छ। यहाँ सत्य छ। हामी एक प्रमुख पुनर्संरचना स्थितिमा छौं। यस कोठामा १० व्यक्ति अब उनीहरूको स्थान वा भूमिकामा हुनेछैनन्। हामीलाई थाहा छैन कि त्यो कस्तो देखिन्छ र हामीलाई थाहा छैन कि त्यो कहाँ जाँदैछ, तर यहाँ हामीलाई थाहा छ कि यो संगठनको व्यवहारिकताको लागि हुनुपर्दछ जुन जारी रहन्छ, त्यसैले सत्य सधैं जित्छ र यहाँ छ यहाँ के हामी तपाईंलाई सहयोग गर्न जाँदैछौं। हामी तपाईंलाई मोडलहरू, उपकरणहरू, कोचिंग, समर्थन, स्रोतहरू दिइरहेका छौं कि यदि तपाईं जो रहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग संसाधन र भविष्यका लागि उपकरणहरू छ, त्योसँग काम गर्नु अघि धेरै गाह्रो बाटो यो नयाँ एकीकृत अधिग्रहण वास्तविकता। र हामी तिनिहरु को लागी जाँदैछौं, यसलाई एक अवसरको रूपमा सोच्नुहोस्। तपाईं प्याकेजको साथ छोड्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो जीवन पुन: लेख्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईं आफ्नो जीवन पुन: निर्माण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। तपाईं पनि सम्झौता मा फिर्ता आउन अवसर हुन सक्छ। हामी कसरी प्रत्येकलाई व्यक्तिगत तवरले हेर्छौं, कसरी हामी तपाईंलाई सुसज्जित गर्न सक्छौं, तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछौं, तपाईंलाई संसाधन गर्न सक्दछौं, र तपाईंलाई तपाईंको उत्तम सम्भावित भविष्य सिर्जना गर्न सहयोग गर्दछौं। “
अब, म तपाईंलाई भन्दै गर्व छु कि त्यो गरेको परिणामको रूपमा, १० व्यक्तिहरू जसले आफ्ना नेताहरूलाई उनीहरूको अर्को अवसर फेला पार्न मद्दत गर्छन्। नेताहरूले उनीहरूलाई प्रशिक्षक बनाए, उनीहरूलाई समर्थन गरे, उनीहरूलाई मार्गनिर्देशन गरे, र ती १० व्यक्तिले पोष्ट घटनाहरू सबै भन्दा राम्रो कुरा भने जुन मसँग कहिल्यै भएको थिएन। मैले परिवर्तन कसरी नेभिगेट गर्ने भनेर सिकें। मैले सिकें कि कसरी अनिश्चित भविष्यसँग सामना गर्ने र जहाँ म समाप्त भएँ, म पहिले भन्दा पनि खुशी थिएँ, त्यसैले म परिवर्तनको पीडालाई बदल्न चाहन्न।
नेताहरू सुन्नका लागि, तपाईं नियमित आधारमा मानिसहरूसँग बस्न इच्छुक हुनुभयो र उनीहरूलाई मानवको रूपमा हेर्न, आँखाको आँखाले, सुन्नुहोस् उनीहरूले डराएको कुरा सुन्नुहोस्। दुखाइबाट बच्नुहोस्। केही अनियमित समाधानमा तिनीहरूलाई नदेखाउनुहोस्। मद्दतहरू मार्फत उनीहरुलाई सहयोग पुर्‍याउनुहोस्।
व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न सहयोग गर्नुहोस्। हामी हाम्रो परिवर्तन नेतृत्व मोडलहरू प्रयोग गर्छौं र भन्छौं, तपाईं अहिले परिवर्तनमा हुनु भएको जस्तो तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? हामी तपाईंलाई कसरी समाधान सिर्जना गर्ने बनाउन सक्छौं?
तपाईं केवल मानिसहरूलाई नकारात्मक हुनुहुन्छ भन्न सक्नुहुन्न र तपाईं परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। तपाईं केवल मानिसहरूलाई भन्न सक्नुहुन्न, यसलाई चूस्नुहोस्, बटरकप। हामी सारिरहेका छौं र हामी जे भए पनि परिवर्तन गर्दैछौं। तपाईं केवल व्यक्ति परिवर्तन वा मर्न भन्न सक्नुहुन्न। तपाईंले जनताको सफलताको बारेमा ख्याल राख्नुपर्दछ र एक नेताको रूपमा तपाईंले आफ्नो बाहुलाहरू गुडाउन र तल झर्दा र फोहोर हुनुपर्दछ र ती गाह्रो, महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू सत्य रूपमा जति तपाईंलाई सम्भवतः तपाईंलाई अनुमति दिइयो भन्ने ज्ञान दिइन्छ। साझेदारी गर्नुहोस् र मानिसहरूलाई तिनीहरूको फाइदा पुर्‍याउने ठाउँमा लैजानुहोस्, तिनीहरूलाई उनीहरूले कसरी मद्दत गरिरहेका छन् देखाउन मद्दत गर्नुहोस् र तपाईं जित्नुहुनेछ। भविष्य साझेदारी गरिएको छ भनेर उनीहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्।
जेसन: मलाई आशा छ कि यस सुन्ने सबै नेताहरूले त्यो लिएका थिए। तपाईले धेरै चीजहरू लिन सक्नुहुनेछ जुन यसलाई साँच्चिकै सम्भव बनाउन सहज बनाउन सकिन्छ र म प्रेम गर्दछु कि सम्पूर्ण आधार सत्यमा स्थापित छ। । मेरो मतलब सत्य यो हो कि बाहिर आउन आवश्यक छ त्यसैले तपाईं यी ईमान्दार कुराकानीहरू पाउन सक्नुहुन्छ र म यो विस्तार गर्न पनि गइरहेको थिएँ र मैले यो सुन्दै गर्दा मलाई यस्तो लाग्छ कि यो प्रायः जसो यो आउँछ जब तपाईंलाई लागू गर्नु पर्छ। आत्म-नेतृत्व, जस्तै तपाईं आफैलाई कत्तिको इमान्दार हुनुहुन्छ। के तपाई हामीलाई त्यसबारे थोरै बताउन सक्नुहुन्छ? म कसरी एक भूमिकामा छु र म कसरी मेरो आफ्नै भूमिका, मेरो आफ्नै कौशल र मेरो आफ्नै विशेषज्ञता को अनावश्यक आउँछ को प्रवृत्ति म देख्न सक्छ? मसँग कसरी आत्म-नेतृत्व छ, त्यो आत्म-इमानदारी जहाँ म पुन: तालिम लिन सक्छु भनेर हेर्न सक्दछु र त्यहाँ अधिक प्रशिक्षणको लागि मैले कुन सीपहरू हेर्नुपर्दछ भनेर सम्भवतः सुझाव छ?
चेरिल: आत्म-नेतृत्व एकदम स्पष्ट, तपाईको अहंकारलाई नियालिरहेको छ। यदि मलाई मेरो भविष्यको काम बेमानी हो भनेर थाहा छ भने, म गर्न लागिरहेको नम्बर एक कुरा मास्लोको हाइरार्कीको अनुसार प्रतिक्रिया हो र त्यो भनेको आफ्नो सुरक्षाको लागि हो।
र यसैले हामी संगठनहरूमा धेरै CYA देख्छौं र हामी तपाईको ** कभर CYA देख्छौं। र हामीले हेर्ने कारण यो हो कि व्यक्तिहरू स्वचालित रूपमा डर प्रतिक्रियामा जान्छन्।
जस्तै, म यो परिवर्तनलाई स्वीकार्न चाहन्न किनकि यसको मतलब यो हो कि ममा जागिर नहुन सक्छ। म कोचको रूपमा के भन्छु, त्यसैले त्यहाँ जाऔं। के हुन्छ भने, तपाईसँग के सीप छ? तपाईं के मूल्य ल्याउनु हुन्छ? तपाईं कसरी मान्छेको जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ? तपाइँ संगठनमा कसरी मूल्य थप गर्नुहुन्छ? किनभने यदि तपाई शाब्दिक रूपमा मूल्य थप्न तार गरीएको छ र तपाई सँधै अन्य व्यक्तिहरूलाई सफल हुन मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले भविष्यको कामको स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्नुभयो, कुनै प्रश्न छैन।
आत्म-नेतृत्व आत्म-सम्मानबाट आउँछ। के तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँको मूल्य छ?
के तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि तपाइँ भविष्यमा कसैको लागि मूल्य सिर्जना गर्न योग्य हुनुहुन्छ?
के तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्छ कि भविष्य साझेदारी गरिएको छ?
र यदि तपाईंले त्यो आत्म-सम्मान पाउनुभयो, वैसे, तपाईंको टोलीहरूले तपाईंलाई पहिले नै गरेको भन्दा बढी माया गर्नेछन् किनकि उनीहरूले देख्छन् कि तपाईं आफैंको रक्षा गर्न कोशिस गर्दै हुनुहुन्न। तपाईं वास्तवमै उनीहरूमा र उनीहरूको सफलतामा ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंको भविष्यको व्यावहारिकता बचाउनको लागि र यदि तपाईं त्यस परिप्रेक्ष्यमा बदल्नुभयो भने, यो कम हो, हे मेरो गेश, म कामबाट बाहिर जान्छु र के गर्छु भन्ने बारे बढी। मलाई थाहा छ के म मान लाई जोड्न को लागी गर्छु। र त्यो मेरो लागि, कसैले सुन्नको लागि मात्रै त्यो अवधारणालाई यसको अर्को स्तरमा अँगालेको छ, तपाईं डराउनुपर्ने वास्तवमै त्यहाँ पाउनुहुनेछ।
व्यक्तिगत नोटमा, म २० बर्ष भन्दा बढी बर्षको लागि एक उद्यमी हुँ। प्रत्येक हप्ता अनिश्चितता हो। मलाई थाहा छैन अर्को ग्राहक कहाँबाट आउँदैछ। मलाई थाहा छैन अर्को पैसा कहाँबाट आउँदैछ। यो २० प्लस वर्षदेखि मेरो वास्तविकता हो। म विश्वास गर्दछु कि सबैजनाले यस मानसिकताको सट्टामा उद्यमितात्मक मानसिकता विकास गर्न आवश्यक छ जुन हामीले ग्यारेन्टी पेचेक गत केही दशकहरूदेखि पाएका थियौं, जुन सुनौलो ह्यान्डकफ हो।
यो वास्तवमै छ। यसले हामीलाई हाम्रो लचिलोपनको कारक भन्दा टाढा सोच्न रोक्छ र धेरै मानिसहरू यो विश्वास गर्न प्रोग्राम गरिएको छ कि तिनीहरू केवल उनीहरूको कामको पहिचान जत्तिकै राम्रो छन जुन उनीहरूमा छन् र परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। परिचय बदल्न आवश्यक छ, हामी उहाँ भन्दा बढि छौं। हामी त्यो भन्दा बढी मूल्य ल्याउँछौं र यदि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न भने, त्यसो भए हामीले आफैमा गर्नुपर्ने काम यो हो कि यसको उच्च स्तरसम्म सम्भव छ।
जेसन: Whew। तपाईं गाना बजाउँदै हुनुहुन्छ र घर हिट गर्दछ। हामी यस एपिसोडलाई बन्द गर्दैछौं, यस बारेमा कुरा गर्दैछ र सम्भवतः मैले अझ यो कुरा काट्नु भन्दा पहिले कभर गर्न चाहान्छु कि म आफ्नो दिनको कामको लागि न्याभिगेट गर्दैछु, कसरी प्रवृत्तिको प्रभावमा आउँदैछ भनेर म कसरी शीर्षमा रहन्छु? म सब भन्दा छिटो? जस्तै म कसरी अगाडि हेर्नु पर्छ भनेर म कसरी रडार राख्छु?
Cheryl: NextMapping मा हामी सबै को बारे मा छन् - "अब के हो?" त्यो प्रश्न धेरै कार्यक्षम छ किनकि हामी टाढा टाढाको भविष्यको बारेमा चिन्ता पैदा गरिरहेका छैनौं। त्यसोभए म तपाईंलाई के भन्दछु ती प्रवृत्तिहरू नेभिगेट गर्दैछ यसले तपाईको भविष्यमा तपाईको व्यक्तिगत र तपाईको चाहना र तपाईको चाहना र तपाईको चाहना र योगदान दिन चाहेको कुरामा व्यक्तिगत रूपमा असर गरेको कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्ने बारे। र त्यसमा नजर राख्नुहोस्। तिमीलाई थाहा छ यो हाम्रो काम हो। त्यसैले मेरो लागि, म सँधै अन्य फ्यूचरिस्टहरूमा छु। तिनीहरू के भनिरहेछन्? तिनीहरु के गर्दैछन? म टेक्नोलोजीमा छु। प्रविधिमा के प्रचलनहरू छन् र यसले समाजलाई कसरी असर गरिरहेको छ?
त्यसोभए मलाई लाग्छ कि तपाईंको हालको काममा हुँदा यस भावी टोपी राख्नु एक चीज हो जुन तपाईं डराउनुको सट्टा अहिले नै सान गर्न थाल्नुहुन्छ। धेरै मानिसहरुको बालुवामा टाउको छ। तिनीहरू जान्न सक्दैनन् कि कसरी चीजहरू परिवर्तन हुँदैछन् वा के भइरहेको छ। म भन्दै छु, त्यसो नगर्नुहोस्। आफ्नो टाउको माथि उठाउनुहोस्। ध्यान दिनुहोस्, किनकि त्यहां त्यहाँ अवसरहरू आफैं प्रस्तुत हुने छन्।
र जे भए पनि, जहाँ उबरका संस्थापक र एयरबएनबीका संस्थापक थिए, उनीहरूले आफ्नो टाउको उठाए र देखे कि भविष्य साझा गरिएको छ र भनिएको छ, यही ठाउँमा समाज जाँदैछ। मानिसहरू मागमा कार चाहन्छन्। तिनीहरू हेर्न को लागी छ जसले उनीहरुलाई ड्राइभ गर्दैछ। तिनीहरू विश्व भ्रमण गर्न र कसैको निवास प्रयोग गर्न सक्षम हुन चाहन्छन्। त्यसोभए यदि हामीले आफ्नो टाउको बालुवाबाट माथि उचाल्यौं भने हामी अवसर पाउँछौं। डराउनुपर्ने केहि छैन। केवल हामीले डराउनु पर्ने चीज भनेको हामी आफैंको विनाश हो।
हामी हाम्रो आफ्नै अवरोधहरू राख्छौं- हाम्रो आफ्नै स्टप ब्लकहरू र मलाई, जुन म डराउन चाहन्छु कि जहाँ म आफूलाई रोकिरहेछु? म मेरो सम्भावितता कहाँ बन्द गर्दैछु? म अवसरहरू कहाँ रोकिरहेछु? किनकि यदि म भविष्यमा हेर्दिन भने, यसको मतलब यो हो कि म केवल बबलमा बस्न चाहन्छु। म अस्वीकारमा बाँचिरहेछु। म जोगिन छु र धेरै पटक नदी अस्विकारमा छु। जेसन, यो रमाईलो छैन। तपाईं अस्वीकारमा धेरै समय बर्बाद गर्नुहुन्छ। मेरो लागि मेरो उत्तम प्रश्न यो हो: "म कसरी उत्तम पत्नी, उत्तम आमा, उत्तम हजुरआमा, सबै भन्दा राम्रो साथी, मेरा ग्राहकहरु लाई उत्तम मूल्यको प्रस्ताव हुन सक्छु?" म केवल हुन चाहन्छु, र यसले मेरो आँखामा आँसु झार्दै छ। म उत्तम मानव बन्न चाहन्छु कि म संभवतः हुन सक्छु र जबसम्म यो मेरो लक्ष्य हो, मसँग भविष्यको शून्य डर छ। शून्य डर।
Jछोरा: चेरिल, हामीसँग यो समय हामीसँग बिताउँदा र यी सबै आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टिहरू साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई लाग्छ कि सबैजना यहाँ छिटो र छिटो आउँदै गरेको भविष्यलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने बारे बिल्कुलै भिन्न मानसिकताको साथ यहाँ छोड्दैछन्।